China AC Single-isigaba 7KW Commercial Ishaja ifektri nabaphakeli | EN-plus
AC Single-isigaba 7KW Commercial Ishaja
ishaja commercial 7KW yenzelwe ukusetshenziswa umphakathi nge RFID ubuqiniso. Ziphethe uhlobo 2 ukushaja isokhethi, ishaja iyahambisana noma uhlobo 1 noma uhlobo 2 ikhebula.
Kuhabisane amazinga zezimboni, ishaja zisebenzisa MID imitha eqinisekisiwe ukuze kuqinisekwe ukuthi zinembile eyakhelwe RCD ukuze uvikele ukuphepha.
Ishaja kungenziwa uxhumeke kwinethiwekhi ukushaja ngosizo EN-GATE kwesango. Multiple amashaja zomphakathi endaweni eyodwa kungenziwa kuhlanganiswe ku inethiwekhi internet eyodwa kuphela zokuxhumana uxhumano.
Lokukhipha yamanje: 32A
Omunye Uhlobo 2 ukushaja isokhethi
MID eqinisekisiwe imitha amandla
RCD Uhlobo A + 6MA DC umphenyi
Kuhabisane OCPP 1.6 (JSON)
Ukuvikelwa Ibanga: IP54
• Inhlalo engenayo inxushunxushu
Bobabili ukulawula wesifunda namandla wesifunda awavikelekile neze. Anti-Jamming Ikhono elandisiwe lezinto ezisebenzisa ukuqinisekisa luyasebenza esitebeleni.
Zibavikele zokudala ezivela hit noma knockdown, uma angle ukuthambekela iphelile 30 °, iyunithi sizovala amandla ngokuzenzakalelayo, ukwehluleka umbiko yesistimu yokusebenza, kususwa noma iliphi ingozi.
Izingubo ezivamile kodwa eziqinile
Omnene ingilazi panel kanye zonke icala metal. IP65 Ukuvikelwa ebangeni ephakeme ukwedlula standard ezimbonini. Umkhiqizo elula nenhle, ukuhlinzeka izinga ngaphakathi nangaphandle.
Yakhelwe imvelo kakhulu ezifana -30 ° C ice neqhwa isizini noma 55 ° C kwelanga elishisayo futhi oqondile. Izingxenye Core ukuthatha zezimboni izingxenye ebangeni ukunikela engu-15 ekuphileni design.
Real-time zokufuna, ukubhuka, fast ukushaja nge isicelo ephathekayo. Ongakhetha Nezimo yokukhokha kuhlanganise RFID ikhadi, kanye nokukhokhwa mobile ezifana PayPal, Alipay, Apple Pay, njll
Okubekwe eceleni amandla ukusetshenziswa incane njengoba 3 ~ 6W, energy nekghono ukwanda kabili kuka efanayo-level umkhiqizo emakethe, ukunciphisa ukusebenza izindleko.
Izigaba / Lines
1 isigaba + netural + PE
AC lokukhipha Okuzisholo
Wall-khweza / Floor-ukuma
Omunye ukushaja isokhethi (Type 2)
Green / Yellow / umbala Red isimo ezahlukene
Bonisa idatha ukushaja
4 izinkinobho umsebenzi kwesikrini
Eziphuthumayo Misa Inkinobho
2pcs Mifare ikhadi
Uhlobo A + 6mA DC
5% ~ 95% ngaphandle ukufingqa
Ngokuhamba / Ngaphansi ukuvikelwa voltage, Ukuvikelwa Ngokweqile, iDemo Ukuvikelwa wesifunda, yamanje Ukuvikelwa ukuvuza, isisekelo Ukuvikelwa, yokwanda Ukuvikelwa, Kuka / Ngaphansi kwesivikelo lokushisa
I-IEC 61851-1: 2017, i-IEC 62196-2: 2016
I-Ethernet / 3G / 4G zokuxhumana
Single-Isigaba / ezintathu okhombisa, 4M ikhebula
Single-isigaba, 4M ikhebula
Fixed Ikhebula esikhundleni Socket
Type1 noma Uhlobo 2 charing isibhamu ne 4M ikhebula
AC Single-isigaba 7KW Ikhaya Ishaja
10kw IzE Ukuze Dc ephathekayo Ev Ishaja
Ac Battery Ishaja
Ac Ev Ishaja
Ac Ukuze Dc Ev Ishaja
Fast 32a IzE yamanje Ishaja
Hola Acid Battery Ishaja
Lokukhipha Ev IzE Ishaja
Wallbox IzE Fast Ishaja
Wallbox Ev IzE Ishaja
AC ezintathu okhombisa 22KW Commercial Ishaja
AC Single-isigaba 3KW Ishaja ephathekayo
AC ezintathu okhombisa 2x22KW Commercial Ishaja
Lifepo4 Battery Charger, Ev Cars On Board Charger, Hola Acid Battery Ishaja, Type2 Plug Ev Charging Station, Ev Dc Fast Ishaja, Ev Dc Charging Stations, All Products